ပို့စ်တင်ချိန် - 3/01/2014 12:51:00 PM
ကြီးသူကို ရိုသေ၊ ရွယ်သူကို လေးစား၊ ငယ်သူကို သနားညှာတာရမယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားဟာ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် လိုက်နာရမယ့်ဆုံးမစကားပါ။
ဘုရားလက်ထက်က မလိုက်နာပဲ လူကြီးကို မရိုမသေပြုခဲ့လို့ လူစဉ်မမီရတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးရှိတယ်။ ကြားဖူးမယ်ထင်ပါ တယ်။ သူ့နာမည်က လကုဏ္ဍကဘဒ္ဒိယမထေရ်တဲ့။ အရမ်းပုကွတဲ့ ရဟန်းပုလေးပါ။ ရဟန်းပုလေးဆိုပေမယ့် ချိုသာစွာ စကားပြောကောင်းတဲ့ ဧတဒဂ်ရ ရဟန်းပေါ့။
တစ်နေ့မှာ လကုဏ္ဍကမထေရ်ဟာ ဘုရားကို အရိုအသေပေးဖို့ ကျောင်းဂိတ်ဝမှာ စောင့်နေပါတယ်။ အဲချိန်မှာ တောမှာနေ တဲ့ ရဟန်းသုံးဆယ်ကလည်း ဘုရားကို အရိုအသေပေးဖို့ ရောက်လာတယ်။ ဂိတ်ဝမှာ ရပ်နေတဲ့ လကုဏ္ဍကကို ကိုရင်လေးမှတ် လို့ ခေါင်းကိုင်လိုက်၊ ပါးဆွဲလိုက်နဲ့ လုပ်ပြီး ဘုရားထံရောက်။ ဘုရားကို ဦးချပြီးနောက် ထိုသို့လျှောက်တင်ပါ တယ်။
"မြတ်စွာဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားမှာ တစ်ဖက်သားကို ကျအောင်ဟောပြောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ လကုဏ္ဍကအမည်ရှိတဲ့ မထေရ်ရှိ တယ်လို့ ကြားမိပါတယ်ဘုရား။ သူဘယ်မှာလဲဘုရား။
အေး သင်တို့ သူ့ကို တွေ့ချင်လို့လား? မှန်ပါဘုရား။
“လကုဏ္ဍကမထေရ်ဆိုတာ တခြားမဟုတ်ဘူး။ သင်တို့ ဂိတ်ဝမှာ သင်္ကန်းဆွဲ၊ ပါးဆွဲနဲ့ ကျီစယ်ခဲ့တဲ့ မထေရ်ပါပဲ။
ဒီတော့မှ ရဟန်းသုံးဆယ်လည်း ခပ်ရှက်ရှက်နဲ့ မျက်နှာမထားတတ်အောင်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားရှင်ကို မေးလျှောက် ကြတယ်။ "အရှင်ဘုရား ဒီလောက် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်ပြီး တရားကိစ္စပြီးနေတဲ့ ရဟန်းဟာ ဘာလို့ အရမ်းပုကွနေရတာလဲ ဘုရား?
ရဟန်းတို့ ကလေးလို ပုကွနေတာဟာ သူ့ရဲ့ အတိက်ကံကြောင့်ပါ။ သူဟာ အတိက်က ဘ၀တစ်ခုမှာ အသက်ကြီးတဲ့
သူတွေကို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ လှောင်ပြောင်ကျီစယ်မူတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ မခံချိမခံသာအောင် ထိကပါးရိကပါးပြောဆိုခဲ့တယ်။ အဲဒီ
မရိုမသေ လှောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ခုလို လူစဉ်မမီအရပ်ပုနေရတာဖြစ်တယ်လို့ ဖြေကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်။
ကံတရားဟာ ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ သတိလက်လွတ်လုပ်လိုက်မိတဲ့ အပြုအမူတစ်ခုဟာ ဘ၀များစွာ တူညီသောတုန့်ပြန် မှုကို ဖြစ်စေပါလား။ အချို့သူများဟာ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချိုတဲ့သူများကို တွေ့ရင် သနားစိတ်ဝင်မယ့်အစား ဟားတိုက်ချင် တဲ့စိတ်ပဲ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ သူများကို ဟားတိုက်မိရင် ကိုယ်လည်းပဲ တစ်ချိန်မှာ ပြန်ပြီး ဟားတိုက်ခံရမယ်ဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကြောင်းလေးက ပြောနေပါတယ်။
အားလုံး လူကြီးသူမများနှါင့်တကွ အင်္ဂါချို့တဲ့သူများကို မလှောင်ပြောင်မိအောင် အထူးသတိထားနိုင်ကြပါစေ။
တိုက်ကြီးမြို့နယ်တွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှ လမ်းဘေးသစ်ပ...
တီဘီဆို ကြောက်ရသလား၊ ပျောက်ပါ့မလား
လယ်တီသိမ် ရွှေ့မှာကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ
နယ်စည်းမထားဆရာဝန်များ ပြည်နယ်တိုင်း ၁၃ ခုမှာ ဆက်လု...
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး ဥပဒေဘောင်တွင်းကကြိုးစားရန် သမ္မတ...
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ စိန်ခေါ်ချက်များ ကြုံနေ
MSF အဖွဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အစိုးရထုတ်ပြန်ြ...
အဆိုတော်မွန်းအောင် မဲဆောက်မှာ လာရောက်ဖြေဖျော် (ရုပ...
လန်ဒန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာစင်တာကြီး တည်ဆောက်ဖို့ ရန်ကုန်မှ...
အင်ဒိုနီးရှား ရိုးရာအစားအစာ ဘာ့က်ဆို စီးပွားရေးလုပ...
မြန်မာနဲ့ ထိုင်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရာဝယ်
တိုးရစ်တွေ များလာပေမယ့် Homestay မပေးသေး
ပိုင်ရှင်မဲ့ မောင်းပြန်သေနတ်တွေ သိမ်းမိတာ စိတ်ဝင်စ...
မြန်မာပြည်က အစားအသောက် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု မရှိဆုံး န...
ဟောင်ကောင်အလုပ်ချိန်သတ်မှတ်မှု မြန်မာအိမ်အကူများ အဆ...
ဆရာဝန်နားကြပ်တွေဟာ ရောဂါပိုးမွှား ပြန့်ပွားရာ အဓိက ...
တစ်မြို့လုံးကို တစ်ခုမကျန် ပြန်ဆွဲ ပြနိုင်တဲ့ Step...
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ...
ယူကရိန်း ပြဿနာတွင် ရုရှားကို စောင့်ကြည့်နေမည်ဟု အေ...
လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံအဆန်းများ...
ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ကြည့်ကောင်းနေစေဖို့အတွက် ကျင့်သ...
မလေးသွား အမျိုးသမီး ၄ ဦး အပါအ၀င် လူ ၇၂ ဦး ဘင်္ဂလာေ...
မာယာပရောဂျက်အတွက် သိပ်ရင်ခုန်နေပါတယ်လို့ ဆိုတဲ့ သက...
ယူကရိန်း အရေး ရုရှကို အိုဘားမား သတိပေး
မျိုးစောင့် ဥပဒေတွေကိစ္စ သမ္မတကို လွှတ်တော် အကြောင်ြး...
တာတို ဒုံးကျည် ၄ ခု မြောက်ကိုရီးယား ပစ်လွှတ်
စစ်ကာလ ပြည့်တန်ဆာမှုတွေ ဂျပန် ပြန်သုံးသပ်မယ်
အစိုးရရဲ့ ပိတ်ပင်မှုကို MSF ထိတ်လန့် အံ့သြ
ရုရှားကတပ်အင်အားပြ ရန်စနေတယ်လို့ ယူကရိန်းယာယီသမ္မတေ...
ခရိုင်းမီးယား လေဆိပ် လက်နက်ကိုင်တွေ ထိန်းချုပ်
ဥက္ကံမြို့ ရှမ်းစုကျေးရွာတွင် တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး...
ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနှင့် မွတ်ဆလင် သူပုန်တို့အကြား ငြိ...
ဥရောပကို ခိုးဝင်လာသူ ၁၁၂ ဦးကို စီစလီကျွန်း ပင်လယ်...
အစိုးရရုံးတွေ လည်ပတ်လို့မရအောင် လုပ်တော့မယ်
ချင်းပြည်နယ်မှာ ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေ များလာ
နှစ်ရက်အတွင်း မီးလောင်မှုနှစ်ခု ပြည်ခရိုင်တွင်ဖြစ်ပ...
ရခိုင်ရိုးမမှာ ဒိုင်နိုဆောလို့ ယူဆရတဲ့ ရုပ်ကြွင်း ...
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ၀န်ကြီးချုပ် ကိုယ်စားလှယ် ၃၂ ဦးနှင့်...
Smartphone Stand Speaker
Toshiba Satellite P50t (Touch) Gaming Notebook
ယူကရိန်းကို ရုရှား စစ်ရေးအရ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှု အမေရ...
နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲကလေး တစ်ရာနီးပါး အမေရိကန် က...
မြန်မာလုပ်သား ငါးထောင်ကျော် ယခုနှစ်အတွင်း တောင်ကို...
ဥပဒေပညာရှင် မပါသော ပထမဆုံး တရားခွင်လက်တွေ့ သရုပ်ပြ...
လမ်းဘေးရပ်ထားသော ယာဉ်ထိန်း မော်တော်ယာဉ် ဝင်တိုက်ခံ...
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အတိတ်ကလုပ်ရပ်တွေကို ငြင်းဆန်နေတာ ရ...
မီးလောင်ဗုံးဖြင့် သပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခံ...
ပေကျင်းအာဏာပိုင်တွေ လေထုညစ်ညမ်းမှု ကာကွယ်တားဆီးရေး ...
ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပေါ်လစီများကို ဖြေလျှော့နိုင်ရန် တရု...
အကယ်ဒမီဇင်ဝိုင်း ဘန်ကောက်၌ ခါးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူ
မိန်းမအချင်းချင်း နမ်းရတာကို ကြိုက်ပြန်တဲ့ မိုင်လီ...
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးရဲ့ စကားအပေါ် ဒါရိုက်တာြ...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်...
သာကေတတွင် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်
လယ်သမား ၁၄ ဦး ထောင်တစ်လစီချမှတ်ခံရ
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး လိပ်ပြာအိမ်
EARTH DEFENSE FORCE 2025 (Game)
EMG (Eleven Media Group) Cartoon
မိန်းကလေး တစ်ဦးပာာ ယောက်ျားလေး နောက်ထပ် တစ်ယောက် ...
မီဒီယာများကိုကြောက်၍ ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း ငြိမ်းချမ...
NLD ပါတီအား ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်က ဒုတိယအကြ...
သတင်းစာဆရာကြီး မြို့မမောင်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်...
ရန်ကုန်တွင် ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည် ကျရောက်မှု အန္တရာယ်ရ...
အမေရိကန် တစ်ဖက်သတ် အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် တစ်နှစ်အတွင...
အချိန်ပိုင်းဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှုများ ရှိမည်ဖြစ်ကြော...
မတ် ၁၇ ရက် တင်မယ့် ကင်တားနား အစီရင်ခံစာ
ရေဆေးအကြည်နဲ့ Nude တွေရေးတဲ့ ပန်းချီမြင့်နိုင်
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အစိုးရ၀န်ထမ်းလစာ ကျပ်နှစ်သောင်း တိ...
အလုပ်ကြမ်းနှင့် နီပေါကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး – ကေ...
၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး ၈၈ အကြမ်းမဖက် ဆောင် ရွက်မည်...
နိုင်ငံခြားခရီးသွား ၀င်ရောက်မှုများလာချိန် တောင်သမန...
မြန်မာ ရေကြောင်းလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတွေ ကမ္ဘာကိုဝင်ဆ...
နောက်ဆုံးပေါ် လန်ဒန်နေ့လယ်စာ စားကြမလား
ဧပြီတွင် မြန်မာနှင့်အင်္ဂလိပ် ဘာသာများဖြင့် ဖော်ပြသည...
ပြောင်းရွှေ့ပေးမယ့်နေရာ သမီးကလေးရွာသားတွေ လက်မခံ
ဒုချီးရားတန်း စုံစမ်းရေး အစီရင်ခံစာ သမ္မတကိုပို့
မွေးကင်းစ ကလေး မှောင်ခိုကွန်ရက် တရုတ် စီးနင်း